HP trader is the authorized door seller for Timber Craft Skin Door . - Timber Craft
HP trader is the authorized door seller for Timber Craft Skin Door .
नेपाली ब्राण्ड टिम्बर क्राफ्टकै ढोका खोज्ने ग्राहको संख्या निकै बढ्यो : हुमनाथ पोख्रेल
विगत १२ वर्ष देखि ढोकाको व्यवसायमा लागेका हुमनाथ पोख्रेल पोखराका सफल ढोक व्यवसायी हुन् । उनी पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा एच पि ट्रेडसमार्फत ढोकाको बिक्रि वितरण गर्दै आएका छन् । सुरुमा अरुको पसलमा मार्केटिङको काम गरेका उनी हाल पोखराकै सफल ढोका व्यवसायीमा पर्छन । नेपाली ढोका उत्पादन गर्दै आएको टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरुको आधिकारिक डिलरको रुपमा पनि उनले काम गर्दै आएका छन् । सुरुवातमा मार्केटिङ गर्न लाई अर्काको कम्पनीमा जब गरेको र पछिगएर आजभन्दा ८ वर्ष अगाडि देखि आफैंले व्यावसाय थालेको उनले बताए । सिक्ने आधारको रुपमा मार्केटिङले राम्रो काम गरेको उनको अनुभव छ । टिम्बर क्राफ्टको कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेकै दिनदेखि टिम्बर क्राफ्टका ढोका बेच्दै आएको बताउने उनी यसभन्दा अगाडि पनि भारतबाट मेसोनाईट कम्पनीको कच्चापदार्थ प्रयोग भएको ढोका आउथे । पछि नेपालमै टिम्बर क्राफ्टले उत्पादन थालेपछि भारतबाट भन्दा पनि नेपालमै उत्पादन भएको ढोका बेच्न थाले । भारतबाट ल्याएर बेच्दा महंगो पनि पर्ने हुनाले नेपालमै उत्पादन हुँदा सस्तो तथा धेरै कुराले सजिलो भएको उनले बताए । उनका अनुसार रेडिमेट भनेपछि पहिले पहिले ग्राहकले आफूले केहि गर्न नपरोश भन्ने चाहाना राख्थे, टिकाउ चाहिएन तर राम्रो चाहियो भन्ने थियो । पहिला पहिला ढोका आर्कषक भए ग्राहक खुसि हुन्थे । पछि विस्तार विस्तारै ढोकाहरुमा समस्या आउन थालेपछि ग्राहको रोजाई पनि फेरिएको छ । अहिले त ढोका एकछिनलाई मात्र राम्रो होईन टिकाउ पनि हुनपर्छ भन्ने ग्राहकहरुको मान्यता छ । ढोका गुणस्तरीय हुनुका साँथै भोलीका दिनमा मर्मत पनि गर्न सकिने सहजै पहुँच पुग्ने खालको ढोका प्रति ग्राहकको रुचि छ । सुरु सुरुमा त टिम्बर क्राफ्टको ढोका वेच्नलाई ठुलो समस्या भउको उनी बताउछन् । उनले भने, ‘ग्राहकलाई विश्वास दिलाउनै गाह्रो थियो । तर अहिले ग्राहकले विश्वास गरेका छन । रेडिमेड ढोकाहरुको आधारमा भन्ने हो भने अहिले त घाम र पानी पर्ने ठाँउमा टिम्बर क्राफ्टका ढोकाको विकल्प नै छैन भनेर भन्न सकिन्छ । ग्राहकहरु पनि धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
टिम्बर क्राफ्ट नै चाहियो भनेर आउने दैनिक ग्राहक धेरै छन ।’ टिम्बर क्राफ्टका ढोकामा गुनासो नै नआउने भन्ने त होइन भन्दै उनले भने, ‘गुनासो नै नआउने भन्ने त के मा छ र ? सयमा ५ प्रतिशत गुनासो आउनुलाई नराम्रो मान्न सकिदैन । भैपरि आएका समस्यालाई कम्पनीले सहज तरिकाले उत्तदायि भएर सम्बोधन गर्दै आएको कारण ग्राहको विश्वास झन बढेको छ । समस्या आएमा ग्राहकलाई मार नपर्ने गरि समाधानको लागि प्रयास गरिराखेका छौं ।’ ढोकाको लागि पोखरामा त्यति धेरै ठुलो बजार त छैन् तर हुमनाथ पोख्रेलले न्युनतम भन्नुपर्दा मासिक ४ सय भन्दा बढि ढोका टिम्बर क्राफ्ट कै बेच्ने गरेका छन् । सवै गरेर उनले ६÷७ सय ढोका विक्रि गर्ने गरेका छन् ।
टिम्बर क्राफ्टले ढोका उत्पादनको भोलुम बढाएमा बजार विस्तार भएमा महिनाको ७÷८ सय भन्दा बढि ढोका बेच्न र ग्राहलाई सन्तुष्ट पार्न सकिने उनी बताउछन् । ढोकाको व्यापार गर्नुभन्दा अगाडि हुमनाथ पोख्रेल कोकाकोला कम्पनीमा मार्केटिङ गर्थे । त्यहिं मार्केटिङ गरेको भएर ढोका व्यापार मै छिरेको उनी सुनाउछन् । उनी भन्छन, ‘कलेज पढ्दा पार्ट टाइम जब गरौं भनि गर्दा गर्दै मार्केटिङ लाईनमा लागियो । यस लाईनमा भविष्य देखेर यसमै सक्रिय छु । परिवारबाट त्यस्तो कुनै दबाब त थिएन । आफ्नै इच्छा अनुसार यसमा लागे । म कृषकको छोरा हुँ, मलाई गाँउ घर राम्रो सँग थाहा पनि ।
मेरो परिवारबाट यस क्षेत्रमा मलाई पूर्ण सहयोग छ ।’ टिम्बर क्राफ्टसँग त्यति धेरै अपेक्षा नभएको बताउदै उनले भने, ‘कम्पनीले के दियो भन्नु भन्दा पनि कम्पनीलाई के दिन सकियो भन्ने नि मुख्य कुरा हो । मेरो त्यति ठुलो अपेक्षा छैन । यो सहकार्य दोहोरै हुन्छ ।’ घर भनेको जीवनमा एकपल्ट बनाउने हो त्यसकारण वरपर वुझेर ढोका खरिद गर्न सवैलाई उनको अनुरोध छ ।
Keshav Bhatta .